एक गतेको उच्च छलाङ | परिसंवाद
गफाष्टक	 आइतबार, फाल्गुन ४, २०७६ मा प्रकाशित
आज कुनै काम छैन फुर्सदको समय सदुपयोग गर्छु भनेर ‘महान जनयुद्धको उच्च छलाङ’ भन्ने पुस्तक निकालेर पढ्न मात्र के बसेको थिएँ टुप्पुलुक्क भिरघरे आई पुग्यो ।
भिरघरेको आँखा कितावतिर प¥यो । अनि भनी पनि हाल्यो – हैन हौ काका ! अझै त्यो आतङ्कको माया लाग्दै छ ? १० वर्ष आतंक मचाएर धेरै जसोले धनगढी, नेपालगंज, सुर्खेत, दाङ, बुटवल, पोखरा, काठमाण्डौ, चितवन, विराटनगर झापातिर घर घडेरी जोडेर मोज गरेर बसेका छन् । तिमी भने चोया काडेर डोको बुनेर जीविका चलाउँदै छौ । अब त्यो तथाकथित जनयुद्धको के मायाँ गर्छौ ?
‘बकबक नगर भिरघरे । मेरो रगत र पसिना, सपना र बिपना, मृत्यु र जीवन, ध्वंस र निर्माण त्यही महान जनयुद्ध नै थियो । अनि कसरी चटक्क बिर्सन सक्छु !‘
ए काका ! बकबक गरेको होइन । सत्य कुरा बोलेको हो । त्यस बेला हाम्रो काँग्रेसको कार्जेकर्ता मात्र होइन एमालेकालाई पनि खोजी–खोजी परमधाम पु¥यायौ । अहिले एमालेमै विलय भए पनि कसले पत्याउँछ ? काका नरिसाउ ‘अघि राँड जानिन, पछि राँड मानिन, बाघ लाग्यो घिच्याउन, राँड लागि चिच्याउन’ भनेको यही माओवादी हो ।
नचाहिने कुरो नगर भिरघरे । महान जनयुद्धको घोर अपमान गरेर प्राप्त उपलब्धीलाई अबमूल्यन गर्दै छस् । अनि माओवादीलाई अपमान गर्ने बहानामा नानाभाँति बोलेर महिलाहरुमाथि समेत अपमान गर्दैछस् ।
काका त्यसै रिसाउनु हुन्छ । खेतको कान्लाबाट उच्च छलाङ मारेको त्यो आतंक भड्खलामा जाकियो । अब केको मायाँ ? ओलीको छहारीमा शितल ताप्न नपुगेको भए माओवादीको सही हालत अहिले छ्याङ्गै देखिने थियो । तिमीलाई त्यो आतंकले तीनवटी श्रीमती भन्दा अरु के नै दियो र !
भिरघरे बोल्दै थियो ठ्याक्कै त्यही बेला मेरी साँहीली श्रीमती भुन्टी आई पुगी ।
ए भिरघरे कति खेर आइस् ? लौ भन भन अस्ति १ गते जनयुद्ध दिवसमा प्रधानमन्त्री पनि आउने भन्ने थियो आए कि आएनन् ?
ए………काकी, तिमी के भाकी ! त्यो तिमार्को महान जनयुद्धको सबैभन्दा तार्किकरुपमा, यथार्थपरक ढंगले, जनताले बुझ्ने गरी शब्दवाणद्वारा घुच्चुकमा प्रहार गर्ने नै ओली हुन । उनी नभएको भए अरु १० हजार जतिलाई तिमार्ले परमधाम पु¥याउने थियौ । अनि माओवादीले आफ्नो सबैभन्दा ठूलो, महान शत्रु घोषणा गरेको व्यक्ति पनि अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई नै हो । अनि कसरी जनयुद्ध दिवस मनाउन ओली आउँछन् ?
नि भून्टी बोली– एक पटक त अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई हाम्रो पार्टीले पागल पनि घोषणा गरेको थियो ।
हेर भुन्टी ! त्यो उबेलाको कुबेलाको कुरो हो अब महान जनयुद्धका प्राधिकार सम्पन्न युद्ध नायक, इतिहास रचयिता, युग पुरुष हाम्रो महान गौरवशाली पार्टीका अध्यक्षले सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा ओलीलाई हटाएर आफैं प्रधानमन्त्री बन्नु हुन्छ । अनि देख्छन् काँग्रेस र एमालेले तिरिझ्याईं ।
हौ काका ! गफ चाहिँ नदेउन होऊ ! मदन भण्डारीको जबज नभएको भए माओवादीले पोकोपुन्तरो बिसाउने ठाउँ पनि पाउने थिएन । ओलीले ओत नदिएको भए संसदमा पुग्ने र लुड्याउने ठाउँ पनि मिल्ने थिएन ।
यो भिरघरे झनक्क रिस उठ्ने कुरो गर्छ । जहिले आउँछ मुटुमा बिझ्ने कुरो मात्र गर्छ । आफूले ठूलो स्वर निकालेर बोल्दा पनि दच्किदैन । हुन पनि भाकै कुरो गर्छ । त्यसबेला हाम्रो पोल खोल्ने नै यिनै ओली थिए । अहिले हाम्रा महानायक ठूला नेता ओलीको पछुवा बनेका छन् । हाम्रो गति यस्तो छ ।
काका अब धेरै नसोचे हुन्छ । अति भयङ्कर, काहाली लाग्दो त्यही नरसंहारको कारण मुलुक ५० वर्ष पछि प¥यो । यो मैले भनेको होइन ओलीले उहिल्यै भनेको । लौ म घरतिर लागें । तिमी भने उच्च छलाङ पढेर बस ।
यति भनेर भिरघरे टिमुरकिँदै हिड्यो । म भने भुन्टीको मुखतिर हेरर टोलाइरहें ।
यति एयरलाइन्स विरुद्ध घमराज लुइँटेल (सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूृर्ण पाठ)